Magaalo dadka ku nool ay dhamaantood ka soo wada horjeedeen dalka Belgium Sabab? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Magaalo dadka ku nool ay dhamaantood ka soo wada horjeedeen dalka Belgium Sabab?
(11-7-2018) Mid ka mid ah Magaalooyinka xiligaan ugu Caansan dalkeena Soomaaliya isla Markaana ay kunool yihiin dad aad u fara badan ayaa dhamaan bulshada ku dhaqan waxa ay ka soo horjeedeen xulka kubada Cagta Belgium iyaga oo Taageerayeyey Faransiiska.
Magaalada Cadaado oo ku taala bartamaha Soomaaliya isla Markaana ay ku noolyihiin dad aad u fara badan ayaa dhamaan bulshada halkaa ku nool waxa ay isku raacsanaayeen in laga badiyo dalka Belgium oo ay sheegeen in ay si xaqdaro ah u xirteen 2 Nin oo wax badan uqabatay bulshada halkaa ku nool kuwaas oo kala ah Madaxweynihii hore ee Ximan iyo Xeeb Tiiceey iyo Maxamed Cabdi Afweyne.
Sida aya shebakeda qalinkacayaaraha u sheegeen qaar ka mid ah dhalinyarada Magaalada Cadaado siweyn ayaa loo daawaday kulankii Semi-finalka koobka aduunka ee dhex maray dalalka France iyo Belgium waxaana dhamaan dadka Cayaartaas daawanayey ay ku qaylinayeen Belgium hadhaco halaga badiyo haka haro koobka aduunka halka qaarkood ay baraha bulshada ku qoreen markii Cayaartu dhamaatay in ay iyagu habaareen Belgium-ka sidaana looga badiyey.
Dalka Belgium ayaa xabsiga dhigay Madaxweynihii hore ee Ximan iyo Xeeb Maxamed Cabdi Xasan (Tiiceey) iyo Ganacsade Maxamed Cabdi (Afweyne) inkasta oo 6 Sano kadib ay sii daayeen Tiiceey halka weli uu xabsi kujiro Afweyne oo ay ku eedeeyeen in uu ahaa aabaha buracad badeeda Soomaaliya cadeyna weli looma helin sida uu sheegay Tiiceey markii lasoo daayey kadib.